ကျွန်မကို လွတ်လပ်ခွင့်လေးပေးပါတော့ …. – Shinyoon
ကျွန်မကို လွတ်လပ်ခွင့်လေးပေးပါတော့ ….
ဒီစကားလေးကို နဲနဲလေးကြောင်တောင်တောင်နိုင်တယ်လို့ ထင်လဲထင်ကြလိမ့်မယ် တကယ်လက်တွေ့မှာ တချို့နှလုံးသားကနေ နာနာကျင်ကျင် ရေရွတ်နေရတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုပါ ။ သူ့မှာ နာကျင်မှုတွေပါတယ် နောင်တတွေပါတယ် ပြီးတော့ မျက်ရည်တွေပါတယ် ။
တချို့ကိုယ့်ကို ဆွဲထားတဲ့လက်တွေဟာ ကိုယ့်ကို ချစ်လို့မဟုတ်တော့မှန်းသိလာတဲ့အခါ ကိုယ်ရုန်းထွက်ချင်ပေမယ့် ရုန်းထွက်လို့မရတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ် သူက မှားပြီး ကိုယ်က တောင်းပန်နေရတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေပေါ့ ။ အရင်ကတော့ ကျွန်မ အနားက ထွက်မသွားပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ တားခဲ့ဖူးပေမယ့်လဲ ခုလောလောတစ်ခုက ကျွန်မကို လွတ်လပ်ခွင့်လေး ပေးစေချင်ပြီ
ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး ပစ်ထားလိုက်လို့လဲရတယ် … တကယ်မချစ်ပဲနဲ့တော့ … ကျွန်မလက်ကို ဆွဲထားမနေပါနဲ့တော့ … ကျွန်မလဲ နာကျင်ရသလို ရှင်လဲ ပျော်မှမပျော်ရပဲလေ ။ လူက အနားမှာရှိပေမယ့်လဲ ကျွန်မအပေါ် အချစ်တွေမှ မရိှနိုင်ခဲ့တာ ။
ကျွန်မကို အနားမှာ ရှိစေချင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို အရင်ကတော့ မဆုံးရှုံးချင်ခဲ့လို့ဆိုပြီး အဓိပ္ပါယ်တွေ ဖွင့်ခဲ့တဲ့ကျွန်မပဲ မှားတာပါ တကယ်တမ်းကျတော့ သူ့အတ္တတွေကို အရောင်တင်ဖို့သက်သက် ကျွန်မ မျက်ရည်တွေ ကျခဲ့ရတာပါ ။
မပျော်တော့ဘူးဆိုရင် မကြင်နာနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် ကျွန်မကို လွတ်လပ်ခွင့်လေးပေးပါတော့ … ကျွန်မလဲ ဒီ ၀ဋ်ကြွေးတွေက လွတ်မြောက်ချင်ပါပြီ ။
ကြၽန္မကို လြတ္လပ္ခြင့္ေလးေပးပါေတာ့ ….
ဒီစကားေလးကို နဲနဲေလးေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ႏိုင္တယ္လို႔ ထင္လဲထင္ၾကလိမ့္မယ္ တကယ္လက္ေတြ႕မွာ တခ်ိဳ႕ႏွလုံးသားကေန နာနာက်င္က်င္ ေရ႐ြတ္ေနရတဲ့စကားလုံးေလးတစ္ခုပါ ။ သူ႔မွာ နာက်င္မႈေတြပါတယ္ ေနာင္တေတြပါတယ္ ၿပီးေတာ့ မ်က္ရည္ေတြပါတယ္ ။
တခ်ိဳ႕ကိုယ့္ကို ဆြဲထားတဲ့လက္ေတြဟာ ကိုယ့္ကို ခ်စ္လို႔မဟုတ္ေတာ့မွန္းသိလာတဲ့အခါ ကိုယ္႐ုန္းထြက္ခ်င္ေပမယ့္ ႐ုန္းထြက္လို႔မရတဲ့အေနအထားေတြရွိတယ္ သူက မွားၿပီး ကိုယ္က ေတာင္းပန္ေနရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးေတြေပါ့ ။ အရင္ကေတာ့ ကြၽန္မ အနားက ထြက္မသြားပါနဲ႔ဆိုတဲ့စကားနဲ႔ တားခဲ့ဖူးေပမယ့္လဲ ခုေလာေလာတစ္ခုက ကြၽန္မကို လြတ္လပ္ခြင့္ေလး ေပးေစခ်င္ၿပီ
ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဆိုၿပီး ပစ္ထားလိုက္လို႔လဲရတယ္ … တကယ္မခ်စ္ပဲနဲ႔ေတာ့ … ကြၽန္မလက္ကို ဆြဲထားမေနပါနဲ႔ေတာ့ … ကြၽန္မလဲ နာက်င္ရသလို ရွင္လဲ ေပ်ာ္မွမေပ်ာ္ရပဲေလ ။ လူက အနားမွာရွိေပမယ့္လဲ ကြၽန္မအေပၚ အခ်စ္ေတြမွ မရိွႏိုင္ခဲ့တာ ။
ကြၽန္မကို အနားမွာ ရွိေစခ်င္တယ္ဆိုတဲ့စကားကို အရင္ကေတာ့ မဆုံးရႈံးခ်င္ခဲ့လို႔ဆိုၿပီး အဓိပၸါယ္ေတြ ဖြင့္ခဲ့တဲ့ကြၽန္မပဲ မွားတာပါ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ သူ႔အတၱေတြကို အေရာင္တင္ဖို႔သက္သက္ ကြၽန္မ မ်က္ရည္ေတြ က်ခဲ့ရတာပါ ။
မေပ်ာ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ မၾကင္နာႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ကြၽန္မကို လြတ္လပ္ခြင့္ေလးေပးပါေတာ့ … ကြၽန္မလဲ ဒီ ၀ဋ္ေႂကြးေတြက လြတ္ေျမာက္ခ်င္ပါၿပီ ။